ဒီနေ့မှာ မမျှော်လင့်ထားပဲ တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယူကြုံးမရဖြစ်ကာရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ရှေ့နေတစ်ဦး – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ကတော့လက်ရှိမှာ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅(က) ထုတ်ခံရပြီး မကြာခငိမှာပဲ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက အထူးစိုးရိမ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်က လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခု တက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ဒါကတော့ပိ်ုင်တံခွန်ဟာ ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဓာဏ် (၃)နှစ်ဆိုပြီး တရားရုံးမှာ စီရင်ချက်ရုတ်တရက် ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေတစ်ဦးက အခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ” အမှန်က ဒီနေ့က ပိုင်တံခွန်အတွက် တရားလိုပြသက်သေစစ်ရဖို့ ရက်ချိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မမျှော်လင့်ထားပဲ တရားရုံးက အမိန့်ချလိုက်တာပေါ့၊ ပိုင်တ့ခွန်အတွက်က တရားလိုပြသက်သေစစ်ပြီး ဆွဲချက်တင်မတင်နှစ်ဖက်လှောက်လဲချက်တင်ရမှာပါ ပြီးမှ ခံပြသက်သေတွေစစ်ပြီးမှ အမိန့်ချမယ့်အစီအစဉ်ရောက်မှာပါ…. ။
အခုက အဆင့်အများကြီးလိုသေးတယ်။တရားစီရင်ရေးလောကမှာ ခုလိုမကြုံဘူးသေးဘူး “ဟု အဆိုပါရှေ့နေက ဆိုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီသတင်းကြားကြားချင်း ပိုင်တံခွန်ရဲ့ မိဘဆွေမျိုးများနဲ့ ပရိသတ်များမှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်တံခွန်ဟာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာ နေထိုင်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်း ကြားသိရပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုင်တံခွန် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်….။
Credit ; Burma Associated Press
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ပိုငျတံခှနျ ကတော့လကျရှိမှာ အငျးစိနျအကဉျြးထောငျတှငျ အကဉျြးကခြံနရေတာဖွဈပါတယျ။ သူဟာ နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ အငျတိုကျအားတိုကျ ပူးပေါငျးပါဝငျမှုကွောငျ့ ပုဒျမ၅၀၅(က) ထုတျခံရပွီး မကွာခငိမှာပဲ ဖမျးဆီးခံခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ပရိသတျတှကေ အထူးစိုးရိမျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးခငျက လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ စိတျမကောငျးစရာ သတငျးတဈခု တကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…။
ဒါကတော့ပျိုငျတံခှနျဟာ ဆန်ဒပွပှဲမြားတှငျ ပါဝငျခဲ့မှုကွောငျ့ အလုပျကွမျးနဲ့ထောငျဓာဏျ (၃)နှဈဆိုပွီး တရားရုံးမှာ စီရငျခကျြရုတျတရကျ ခမြှတျလိုကျတဲ့အကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ရှနေ့တေဈဦးက အခုလိုပဲပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော.။ ” အမှနျက ဒီနကေ့ ပိုငျတံခှနျအတှကျ တရားလိုပွသကျသစေဈရဖို့ ရကျခြိနျးဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ မမြှျောလငျ့ထားပဲ တရားရုံးက အမိနျ့ခလြိုကျတာပေါ့၊ ပိုငျတ့ခှနျအတှကျက တရားလိုပွသကျသစေဈပွီး ဆှဲခကျြတငျမတငျနှဈဖကျလှောကျလဲခကျြတငျရမှာပါ ပွီးမှ ခံပွသကျသတှေစေဈပွီးမှ အမိနျ့ခမြယျ့အစီအစဉျရောကျမှာပါ…. ။
အခုက အဆငျ့အမြားကွီးလိုသေးတယျ။တရားစီရငျရေးလောကမှာ ခုလိုမကွုံဘူးသေးဘူး “ဟု အဆိုပါရှနေ့ကေ ဆိုလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။ဒီသတငျးကွားကွားခငျြး ပိုငျတံခှနျရဲ့ မိဘဆှမြေိုးမြားနဲ့ ပရိသတျမြားမှ စိတျမကောငျး ဖွဈခဲ့ကွရတာ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျတံခှနျဟာ အကဉျြးထောငျထဲမှာ အေးခမျြးတညျငွိမျစှာ နထေိုငျလကျြရှိနတေယျလို့လညျး ကွားသိရပါတယျ။ ကဲ ပရိသတျကွီးလညျး ပိုငျတံခှနျ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျဖို့ ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော….။